जब श्रीमानले श्रीमतीका लागि खेताला ल्यायो ! — Motivatenews.Com
जब श्रीमानले श्रीमतीका लागि खेताला ल्यायो !
काठमाडौं – एउटा गाउँमा एक जना मूर्ख थिए । तर उनकी पत्नी भने एकदम चलाख र पतिब्रत थिइन् । पति एकदम काम नलाग्ने, केही नकमाउने थिए । दिनभरी बसेर अनेक कुरा मात्र गर्दथे । उनकी पत्नीले यताउता काम सकेर अलिअलि कमाएर ल्याई परिवार पालेकी थिइन ।
एक दिन त्यो मुर्ख बजार घुम्न गयो । उसले त्यहाँ एक जना मान्छे भेट्टायो । त्यो मान्छेलाई कसैले मूर्खकी श्रीमती एकदम राम्री छे भनेर सुनाइदियो । उसले मूर्खलाई भन्यो, ‘हेर, तिमीले तिम्रो श्रीमतीलाई एक रात मसँग सुताइदियौ भने म तिमीलाई एक हजार रुपैयाँ दिन्छु ।’
उसले त्यो मान्छेलाई घर लिएर आयो र आफ्नी पत्नीसँग भन्यो, ‘तिमी आजको रात योसँग सुत्यौंभने यसले मलाई एक हजार रुपैयाँ दिन्छ रे । त्यसैले मैले यसलाई यहाँ लिराएको ।’
यो सुनेर ती महिला साह्रै रिसाइन । त्यो मूर्खले फेरी भन्यो, ‘ल सबैभन्दा पहिला त तिमी यो मान्छेलाई दुई ओटा रोटी पकाएर खानदेऊ बाँकी कुरा जे होला हेरौला ।’ उनकी पत्नीले मनमा चिन्ता हुँदाहुँदै भनिन, ‘दुईवटा त के चारैवटा रोटी खाना दिउँला ।’ आफ्नो पतिको बानी व्यहोरा राम्रोसँग बुझेकी उनले एउटा काम गर्न पठाइन । उनले भनिन, ‘म रोटी पकाउँदै गर्छु, हजुर बाहिर गएर पाहुना सुताउने खाट कस्ने डोरी लिएर आउनुहोस् ।’
पति डोरी लिन बजारतिर लाग्यो, उनी पकाउने तयारीमा लागिन । खुर्सानी निकालेर सिलौटामा पिस्न थालिन । केहीवेर पछि एकदम रुन थालिन । रोएको देखेर त्यो मान्छेले सोध्यो, ‘हैन किन रोएकी ?’
महिलाले उत्तर दिइन, ‘मेरेो पति एकदर्म बदमास हुनुहुन्छ । उहाँको यति नराम्रो बानी छ कि बाहिरबाट जहिल्यौ एक जना मान्छे लिएर आउनुहुन्छ । हातखुट्टा बाँधेर खाटमा सुताउनु हुन्छ र आँखामा पिसेको खुर्सानी दलिदिनुहुन्छ । खुर्सानी त मैले पिसिरहेकी छु, डोरी लिन उहाँ बजार जानु भएको छ । त्यसैले म रोएकी हुँ ।’
उसले मूर्ख मान्छे डोरी लिएर फर्किएको देख्यो र एकदमै आत्तियो । त्यहाँबाट उसले कुलेलाम ठोक्यो । पतिले घर आएर पत्नीलाई सोध्यो, ‘किन भागेको हो त्यो मान्छे ?’ पत्नीले उत्तर दिइन, ‘मैले यो खुर्सानी पिसिरहेको थिएँ, यहाँ आएर मलाई खुर्सानी देउ भन्नुभयो । अनी मैले, यो हजुरका लागि नै खाना बनाउनका लागि पिसिरहेकी हुन, त्यपछि खानुहोस् न, भनेकी मात्र थिएँ रिसाएर जानुभयो ।’
पतिले गाली गरे, ‘तँलाई ! एउटा खुर्सानी दिएको भएपनि हुन्थ्यो नी ! पख् म दुई चारवटै दिएर बोलाउँछु ।’ यसो भनेर उ एक मुठ्ठी खुर्सानी बोकेर त्यो मान्छेको पछिपछि डौडियो । ‘पख्नुहोस्, पख्नुहोस् । यो खुर्सानी त लिनुहोस् ।’
त्यो मान्छेले पछाडी फर्केर हेर्यो । ओहो ! यो त खुर्सानी दल्नलाई पछिनै लाग्यो ।’ यस्तो सोचेर उ झन बैस्सरी भाग्यो ।
तसर्थ, मुर्खबाट टाढै रहनुपर्छ । अन्यथा सबैलाई हानी हुन्छ ।